Imbongi iqokwe kowezindondo | News24
Imbongi iqokwe kowezindondo
ISITHOMBE: sithunyelweUSfiso Gwala.
IMBONGI yasendaweni yaseNchanga uSfiso Gwala nowaziwa ngelikaSfisomafree uqokwe emncintiswaneni wezindondo zentsha obizwa ngokuthi yi-Live Your Dream Youth SA Awards nazobanjelwa ePlayhouse eThekwini mhla zingama-24 kuLwezi (November) nonyaka.
UGwala, osebenza njengomhlengikazi, uqokwe ngaphansi komkhakha wezinkondlo kanti ukuwina kwakhe kuncike kumavoti azowathola aphuma kubalandeli bakhe.
Ekhuluma ne-Echo uGwala uthe ujabule kakhulu ukuthi athole ithuba lokuthi abe yingxenye yomcimbi wezindondo. Uthe kwakuhleli kuyiphupho lakhe vele ukuthi agcine engenile emncintiswaneni efana nalena kanye neminye engaphezu kwawo.
“Lokhu kusho lukhulu kumina njengembongi kanti futhi kuyangikhuthaza ukuba ngiqhubeke ngisebenze ngokuzikhandla ukuya phambili,” kubeka yena.
UGwala uthe waqala ukungena emkhakheni wezinkondlo ngonyaka wezi-2011 kanti kumanje ungaphansi kohlelo losonkondlo lwaseNchanga.
“Ngiyakuthanda ukuba yimbongi kangangokuba kwesinye isikhathi ngize ngihayele ngisho iziguli izinkondlo zami emsebenzini ngoba ngifuna zibuyise ithemba. Ngikwenza lokhu ngoba ngiyazazi izinkondlo zami ezi ningi ziyafundisa kanti futhi ziyagqugquzela ukuba abantu bangalilahli ithemba kodwa baqhubekele phambili ngisho kunzima. Inkondlo yami yokuqala yayithi ‘Bathande bonke kodwa uze ungathembi noyedwa’.”
Uqhube wathi njengoba eseqalile kulo mkhakha wezinkondlo uzibona eya kude kakhulu kanti isifiso sakhe ukuthi akwazi ukuthi ashiyelane inkundla nabanandisi abahlukene emicimbini efana nama-Gospel Crown Awards kanye nama-Satma Awards.
“Into engingathanda ukuyisho nje kwintsha yakithi ukuthi kumele bazi ukuthi ubuciko buyaphilisa, buyakhana bukuqoqe futhi ukuthi uzazi ukuthi uwubani ungashaywa isizungu uze ugcine sewenza izinto ezingalungile. Mina ke ngiyaye ngithi umuntu kumele azifune azithole ngoba ngiyakholelwa ukuthi wonke umuntu unesiphiwo sakhe esahlukile. Uma ususitholile ke isiphiwo sakho kumele usukume usiveze usisebenzise ujabulise umhlaba.”
UGwala kumanje umatasa usebenza kwi-album yakhe esihloko sithi Amaphiko Obuhlakani. Uyatholakala futhi uma ngabe ufuna ukumumema emcimbini enombolweni ethi : 078 115 4638.
Ukumvotela kuma-Live Your Dream SA Youth Awards SMS LYD850 enombolweni :45633. I-SMS ibiza u-R1,50.